Chii chisina chivakwa, chinoshanda sei, kodzero uye zvisungo | Ehupfumi Zvemari
Kune dzimwe nguva apo iwo mazano asina kunyatsojeka uye isu tinogona kuanzwa asi tisinganyatsonzwisisa zvazvinoreva. Izvi ndizvo zvinoitika nekusava nemuridzi.
Kana iwe wakambonzwa nezvazvo, asi usingazive chaizvo zvazvinoreva, pano tinogona kukubatsira. Isu tichakuudza chii chiri pachena muridzi, mashandiro ainoita, ndedzipi kodzero nezvisungo zvinoitirwa muridzi asina chinhu uye musiyano neiyo usufruct.
1 Chii chiri pachena muridzi
2 Sei kuve muridzi kunoshanda
3 Nuda muridzi uye usufruct, zvakafanana here?
3.1 Iyo usufruct inopa kodzero yekushandisa uye kunakirwa
3.2 Iyo usufruct inongogara kwenguva pfupi
4 Kodzero uye zvisungo zvemuridzi asina kupfeka
4.1 Kodzero dzemuridzi asina kupfeka
4.2 Zvinosungirwa nemuridzi asina chinhu
Iyo isina chinhu chivakwa inogona kutsanangurwa sekodzero. Muzvokwadi, ikodzero iyo munhu ane pamusoro pechinhu icho iye ega muridzi. Asi panguva imwechete iyo ine muganho wekuti haina mvumo yekuve nayo uye kunakidzwa, inova iyo pfuma yeavo vane usufruct.
Izvi zvinorevei? Zvakanaka tinotaura nezve chii munhu anogona kuve muridzi wechakanaka asi asingakwanise kuchinakidzwa nekuti zvinoenderana nemumwe munhu.
Tinokupai muenzaniso! Fungidzira kuti kune imba. Izvi ndezve munhu asi iye afunga kupa pfuma yeimba iyoyo kumwanasikana. Zvino, anongosiya iyo chivakwa. Iyo usufruct, ndiko kuti, kodzero yekufarira imba iyoyo, inopihwa kune mumwe mwana. Zvinorevei? Zvakanaka, iyo isina chinhu chivakwa ndeyake nemwanasikana, nekuti ndiye iye ane mvumo kune iyo pfuma iyo yaave ave muridzi wayo. Asi iwe hauna mvumo yekuve yako kana kunakidzwa nayo.
Chinhu chakajairika ndechekuti kuburitswa pachena uye iyo usufruct ndeyaiye munhu mumwe chete, asi pane mamiriro ezvinhu izvo izvi zvisingaitike.
Sei kuve muridzi kunoshanda
Kushanda kwepfuma isina chinhu kuri nyore kunzwisisa nekuti muridzi, uye muridzi wepfuma iyoyo, chaainacho muridzi wacho. Asi haakwanise kuishandisa kana kunakidzwa nazvo kana asina kuburitswa kwechakanaka ichocho naye.
Saka, isu tine nhamba mbiri dzakasiyana:
Muridzi banga, ndiani muridzi wepfuma iyoyo.
Iyo usufructuary, ndiani iyeye anofarira izvo zvakanaka.
Nuda muridzi uye usufruct, zvakafanana here?
Iye zvino zvaunoziva kuve muridzi usina chinhu zvishoma zvakanyatso nyatso, uye kuti iwe waona kuti chakabatana zvakanyanya neusufruct, unogona kufunga kuti ivo vakafanana, kunze kwekusiyana ikoko kwevaridzi nekunakidzwa. Asi chokwadi ndechekuti pane mimwe misiyano yakawanda yekutarisa iyo inotsanangura kupatsanurana kukuru pakati pezvinhu zviviri izvi.
Nekudaro, isu tinowana zvinotevera:
Iyo usufruct inopa kodzero yekushandisa uye kunakirwa
Muridzi wenodhi ndiye munhu ane pfuma. Asi kwete kushandiswa uye kunakidzwa, kunoenderana nekwenzvimbo yekushandisa. Izvi, zvakare, zvinogona kurasa izvo zvakanaka, kunakirwa nazvo, kuzvishandisa ... asi haina chivakwa. Zvisinei, ehe unogona kutengesa, kuroja ... izvo zvakanaka. Muchokwadi, uye kunze, iwe unogona zvakare kugovera yako usufruct kurudyi kune vamwe vanhu.
Iyo usufruct inongogara kwenguva pfupi
Uye ndezvekuti usufruct ikodzero yemunhu kunakidzwa nechimwe chinhu, asi, izvi hazvisi zvachose, asi duration inowanzo sarudzwa na, kazhinji nguva dzese, kufa kwenzvimbo yekushandisa. Chero bedzi iwe uri mupenyu, iwe unogona kunakirwa izvo zvakanaka.
Mukupedzisa, tinogona kutaura kuti kuve muridzi chete kunopa munhu humbowo hwezvakanaka, asi haagone kuita chero chinhu nazvo. Ndokusaka dzimwe nguva nyanzvi mumunda dzichitaura kuti pfuma isina chinhu "isina chinhu."
Saka munhu asina kupfeka pfuma haatombowana iyo usufruct? Kwete, zviripo fungidziro mune iyo muridzi node inogona kuve nekushandisa uye kunakidzwa. Izvi zvinoitika kana:
Iyo usufructuary inotengesa iyo usufruct kumuridzi weiyo isina chivakwa chivakwa.
Kana paine kutsakatika kwekubvisa, izvo zvinogona kunge kuri nekuda kwekufa kwenzvimbo yekuzadzisa, kuzadzikiswa kwetemu yeiyo kubvuta, kana kutevedzera kunofanirwa kutonga kuti iko kuburitsa kuitike.
Kodzero uye zvisungo zvemuridzi asina kupfeka
Isu takataura kuti kubereka wega kunopa muridzi uye hapana chimwe chinhu. Uye saka zvirizvo, kuva nechakanaka chausingakwanise kushandisa zvinoita kunge kupusa. Nekudaro, izvi zvinogona kuuya nekodzero dzinoverengeka uye zvisungo zvinofanirwa kuzivikanwa.
Kodzero dzemuridzi asina kupfeka
Nekuva muridzi asina, une kodzero dzinotevera:
Kugona kugadzira uye kugadzirisa. Chero bedzi usingatadzise nzvimbo yekushandisa. Ndokunge, kana akanyunyuta, mabasa anogona kuoma mitezo.
Iye muridzi wepfuma. Kunyangwe kana usingakwanise kunakidzwa nazvo, ndeyako uye zvinoreva kuti unogona kuitengesa kana kuitenga mogeji. Nekudaro, izvo zvinofanirwa kutarisirwa mupfungwa kuti mutengo waizowanirwa haungave wakakwira sekunge iwo waivewo nekutora kweiyo pfuma.
Unogona kutengesa kana kuita mogeji. Izvi zvine nuances, nekuti izvo zvaunogona chaizvo kutengesa kana kutenga imba ndeye isina chinhu chivakwa. Kureva? Eya, wechitatu munhu angatora chinzvimbo chemuridzi iyeye uye aizove nekodzero dzakafanana uye zvisungo. Panyaya yeiyo mogeji, iwe unogona kukumbira mogeji pane iyo isina zvivakwa (ichave iri shoma pane yaungabhadhara iyo yakakwana aseti, asi inogona kuitwa).
Aizove nekodzero yekuti usufruct. Kamwe apo kodzero yeusufructuary yakanga yapera. Muchokwadi, muzviitiko zvakawanda inenge iine sarudzo kubvira payakafa, kana kodzero yeusufruct ikadzimwa, yaizodzokera kumuridzi wepfuma.
Zvinosungirwa nemuridzi asina chinhu
Pamusoro pekodzero, muridzi asina chinhu anofanirawo kuzadzisa zvisungo izvo kodzero yake yemuridzi inoda iye, uye izvi ndeizvi:
Tora mutariri we kugadzirisa kunoshamisa. Ndokunge, iwe unofanirwa kugadzirisa izvo zvakapwanyika uye izvo zvinokurumidza kugadzirisa.
Remekedza usufructuary. Mune mamwe mazwi, iwe haugone kuita chero chiito chinokuvadza kodzero yenzvimbo yekushandisa.
Bhadhara mitero nemitero yeizvozvo zvakanaka. Kuva wako, unofanirwa kutarisana nemari iyo inoreva izvi. Pakati pemitsetse yakafanana, aifanira kutarisira mari yemunharaunda. Pane dzakawanda nguva, mari yekugara inowanzobvumiranwa nenzvimbo yekushandisa, nenzira yekuti ndiye anopedzisira avabhadhara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » nzvimbo yekugara » Chii chiri pachena muridzi
Maitiro ekuchengetedza mari